I-Biography kunye neProfayili ye-Pop-Soul Band Maroon 5
Imihla Yokuqala kunye nokuQalwa kweeNkatha zeKara
I-Maroon ezayo 5 amalungu uAdam Levine, uJese Carmichael, uMickey Madden noRyan Dusick bonke baya esikolweni esiphakeme ndawonye nasentshonalanga eLos Angeles. Bafaka ndawonye iqela elibizwa ngokuba yi-Kara's Flowers kwaye badlala umboniso wabo wokuqala obala kwiWhiskey ehambayo ukuya ku-1995. Indlela yabo yegunge yaqwalasela iRe Reprise Records, kwaye, nangona imveliso evela kumvelisi weGreen Day uRob Cavallo, i-albhamu IWorld World yayiyintengiso yokuthengisa.
Onke amalungu angama-4 ayishiyile iphrojekthi kwaye aya kwiikholeji ezahlukeneyo kulo lonke ilizwe.
Ukuguquka kweMvelo ku-Maroon 5
UAdam Levine noJese Carmichael ababhalise kwiYunivesithi yaseNew York. Kukho iibini ziboniswe kumculo obanzi, ngokukodwa i-R & B kunye ne-hip-hop. Ekubuyiseleni eLos Angeles, baxhamla kunye namanye amalungu eqela langaphambili, wongezwa ngugqirha uJames Valentine, kwaye bakhetha igama elitsha leqela, iMaroon 5. Ibhanti yakhawuleza yenza i-label interest kwaye yatyikitya ne-Independent Records ye-Octone. nge BMG.
Malaro 5 Malungu
Adam Levine - Amazwi kunye neGitare
Jesse Carmichael - Iibhodi zebhodi
Matt Flynn - Iingoma
I-Maroon 5 iya kwi-studio kunye no-Matt Wallace, umlindi womsebenzi kunye noTshintsho kunye noThilo olungakumbi, ukuvelisa. Umphumo waba yi-albhamu Iingoma NgoJane zikhishwe kuqala ngoJuni 2002.
Uninzi lomculo kwi-albhamu luphefumlelwe ngu-Adam Levine ubudlelwane obubi kunye nentombi yakhe yangaphambili, uJane. I-albhamu yayingeyona mpu melelo yoshishino, kodwa ukhenketho oluqhubekayo lwakhiwa inkxaso yomsakazo. Iingoma NgoJane zazingena kwi-# 6 kwi-chati ye-albhamu ngo-Agasti 2004, ngaphezu kweminyaka emibini emva kokukhululwa kokuqala.
Umntu oyedwa oyedwa "I-Harder To Breathe" yafikelela kwi-top top 20. Owesibini ongatshatanga "Olu Luthando" lubetha phezulu 10 kwaye lwaphumelela ngeGramy Grammy ye-Best Performance Pop ngo-Duo okanye kwiQela elinamaVocals. I-Maroon 5 nayo ithatha i-Best Best Artist Grammy Award. Iingoma NgoJane zavelisa enye inkulu, i-top 5 ishaya "Iya Kuthandwa."
Maroon 5 Iingxelo
Liya Kuza Kudala Kungekudala
"Awuyi Kuya Ekhaya Ngaphandle Kwakho"
IMaroon 5 IiVideos
Ividiyo ze-Maroon 5 ze-10 eziphezulu zithi "Olu Luthando" kwaye "Uya Kuthandwa" lwavelisa ingxabano ngenxa yobuthakathaka babo. "Olu Luthando" lwavalwa ngokufutshane nge-MTV. Jonga izinto ezingcono zevidiyo zomculo ze-band ezantsi.
"Musa Ufuna Ukwazi"
"Ukuba Andizange Ndiphinde Ndiphinde Ndibukeke Buso Bakho"
Ngeke Kufike Kungekudala Ngaphambi Kude
I-albhamu yesibini elindelwe kakhulu yi-Maroon 5, ebizwa ngokuba Ngeke ifike Kungekudala ngaphambi kwexesha elide, yakhululwa ngoMeyi 22, 2007. Yayibonakalisa umculi omtsha uMat Flynn, owayengumlungu wamalungu eRyan Dusick ngoSeptemba 2006. Ibhendi yathi i-albhamu "yayisisigxina, sinamandla," kwaye "yayingumnyama" kuneengoma ngoJane .
Umntu oyedwa oyedwa "Undenza Ndimangalise" i-# 1 kwi- Billboard Hot 100. I-albhamu yavulwa kwi # 1 kwiitshati ezithengisa iikopi ezingaphezu kwama-400,000 kwiveki yokuqala. Ekugqibeleni yayiqinisekiswe i-platinum ephindwe kabini. Owesibini ongatshatangayo "Wake Up Call" naye wafikelela kwi-pop phezulu 20. "Undenza Ndimangalise" wamphumelela iNkxaso yeGrmmy yeNtsebenzo yePap yasePopular ngokuDuo okanye iqela kunye neVocal. Ngeke Kube Kungekudala ngaphambi kokuba ude Long anyulelwe kwi-Best Pop Vocal Album.
I-Maroon 5 iya kwiSwitzerland ngo-2009 ukurekhoda i-albhamu yayo yesithathu, i- Hands All Over , kunye nomlimi uRobert John "Mutt" Lange, onoxanduva lokugcina i-albhamu yeemoto ngeeMoto, uLe Defard, umfazi wakhe owayengumfazi uShania Twain, nabanye abaninzi . Nangona kwakuyimpumelelo ephambili, kwakuyidimazo lokuthengisa. Kwafika kuphela kwi-2 yesiqulatho se-albhamu kwaye yahluleka ukuvelisa i-pop ephezulu ye-10.
Nangona kunjalo, iqela lalingekho phantsi ixesha elide. Ukulandela impumelelo emangeleyo yokubonisa i-TV Izwi kunye no-Adam Levine njengomcebisi, ibhendi ibhale enye ethi "Ukuhamba NjengaJagger" noKristuina Aguilera kwaye iya kwi # 1 kwaye yaba yinto ebaluleke kakhulu yokusebenza kwabo. "Uhamba NjengeJagger" wawubandakanyiwe ekukhutshweni kwakhona kweeNdawo zonke ngaphaya kwee-albhamu kwi-10 ephezulu kwaye ekugqibeleni i-platinum isatifiketi yokuthengisa.
I-Streak ye-Top 10 Hits
Ekuvukeni kwempumelelo ye-"Moves Like Jagger," i-Maroon 5 yaqalisa into ehamba phambili yezinto ezilishumi ezisibhozo ezilandelelanayo eziphambili ze-pop hits ezingabonakaliyo ezivela kwii-albhamu zazo ezilandelayo. Impumelelo yasiza ukuhlamba iqela kwiindawo eziphezulu zabaculi abaphambili emhlabeni jikelele.
Ukuxhamla yimpumelelo ye-"Moves Like Jagger," i-Maroon 5 isebenze kunye neentlobo ezahlukeneyo zokuvelisa abadlali kunye nabaculi beengoma kwi-albhamu yabo yesine. Isiphumo sasi-# 2 i-albhamu yokutsala nge-platinum isitifiketi kunye nomtya wezine eziphezulu eziphezulu ezi-10. Baquka "olunye ubusuku boBusuku," ibhola elide kunabo bonke elilawulayo # 1 lichithwa lichitha iiveki ezilisithoba ngaphezulu. Yaveliswa kwaye yabhalwa ngokubhaliweyo yiqela likaMax Martin lokuvelisa. Umgcini wefilimu oguguleyo uPeter Berg wadala ividyo yomculo ebonisa u-Adam Levine ohamba phambili njengomloli wenhlanhla. Umntu okhokelayo "I-Payphone" ebanjwe # 2 kwidatha ye pop, ibandakanya ukubukeka okubonakalayo kwincwadi ye-rapper Wiz Khalifa, kwaye kwakuquka uSamuel Bayer othe wathwebula ividiyo yomculo.
I-Maroon 5 ebizwa ngokuba yi-studio ye-albhamu ye- V yesiqingatha se-Roman esimele inani elithandathu.
Yayi-albhamu yokuqala ye-Maroon 5 ekhutshwe kwi-Interscope emva kwe-A & M Okoneke kwaye yaphelisa imisebenzi kwaye idlulisela iMaroon 5 kwileyile ye-Interscope. Yaba yinto yesibini yebhanti evule i-albhamu evula phezulu kwetshathi. Ivelise ezintathu zokulandelana eziphezulu ezilandelelanayo. Isithathu sesinye "I-Sugar" iya kwi # 2 kwi-chart yangama-pop singles kwaye yayiquka ividiyo yomculo eyahlukileyo ebonisa iMaroon 5 njengemikhono yomtshato. Ingoma yayibhalwa nguMike Posner ngee-albhamu zee-albhamu zakhe, kodwa wathumela ingoma kuMaroon 5 emva kokuba i-albhamu yakhe ikhutshwe. "I-Sugar" izuze ukutyunjwa kweGraam ye-Grammy ye-Best Pop Duo okanye yeNtsebenzo yeqela.
Ngo-Oktobha 2016 iMaroon 5 yakhulula omnye "Musa Ufuna Ukwazi" ngezwi elibonakalayo elivela ku-rapper uKendrick Lamar . Kwabhaliwe kunye kunye noBenny Blanco. I-albhamu ye-studio yesithandathu ayikulindelanga de kube ngu-2017. U-Adam Levine okhokelelwa ngu-Leader utshele iWoward Stern kwingxoxwa yomsakazo ukuba kuya kuba, "irekhodi enkulu yezobugcisa." "Musa Ufuna Ukwazi" ngokukhawuleza waba nguMaroon 5 weshumi elinesibini ephezulu ye-pop hit single kwaye yenza 2016 unyaka wabo wesithandathu olandelelanayo kunye ne-one-top 10 ye-hit hit. "Musa Ufuna Ukwazi" kwakhona utshitshisa phezulu 10 kwi pop pop and charts pop.
Iprofayili yomLawuli weNgcaciso
I-American Bandstand - ezili-10 ezinkulu
Oluninzi kuMculi weCape Music Backup, uMarty Slayton
I-Biography kaJack Johnson, uMculi-Ingoma kunye noMvelisi
Iiphambili zee-30 zeeBhanki zeeNkcazo zexesha lonke
I-Top 20 Country Songs Iingoma zama-1990s
Izizathu zeRussian Revolution
I-Roller Coaster Monologue
Uphi na xa iikhamera zasekhaya
Indlela Yokufumana Iimilinganiselo Ezingundoqo kunye neThebula le-Chi-Square
Funda i-Easter kunye Nokuba kutheni amaKristu ayigubha
Ingqungquthela ye-'Wizard of Oz 'Ukuzibulala
UMary Mcleod Bethune: iNkokeli kunye neNkokheli yamaLungelo eNkcubeko
Inkcazo kunye nemizekelo yeePhonotactics kwiPhonology
IJografi yaseVancouver, eBritish Columbia
Uluhlu lukaBob's 'Burgers'
Iingoma eziQalayo eziQala ngeNqanaba elinesithathu
Ukuhamba kweRush - Inkcazo kunye Nenkcazo
Ngaba Unako ukuya kwiSikolo seGrey for Great Meer Than Undergrad?
Ukukhetha iKholeji epheleleyo
Ixabiso elilindelekileyo eRoulette
Ubundlobongela kunye nezopolitiko Amahlaya